हावाले भरिएको बेलुन र घमण्डले भरिएको मान्छे उस्तै हुन्, जसलाई फुटाउन पर्दैन, आफै फुट्छ – नेपाली संगसार
हावाले भरिएको बेलुन र घमण्डले भरिएको मान्छे उस्तै हुन्, जसलाई फुटाउन पर्दैन, आफै फुट्छ
नेपाली संगसार calendar_today ३१ बैशाख २०७८, 6:36 am
१-पग्लिरहेको हिउँ जस्तै बन, आफुलाई पखाल्दै जाउ ।
२-तिमी ठुलो आवाज मार्फत होइन, शब्दहरु मार्फत बोल किनकि फूलहरु फुल्ने पानीको कारणले हो, मेघ गर्जनले होइन ।
३-सफलताको लागि तीन चिज को आवश्यकता पर्छ लगनशिलता, धैर्यता र सकारात्मक सोच ।
४-हावाले भरिएको बेलुन र घमण्डले भरिएको मान्छे उस्तै हुन्, जसलाई फुटाउन पर्दैन, आफै फुट्छ ।
५-असफल मान्छे दुनियाको दरले सोच बदल्ने गर्छन् तर सफल मान्छे आफ्नो सोचले दुनियालाइनै बदल्ने गर्छन् ।
६-जिन्दगीको एक मात्र लक्ष्य जागिर खाने होइन, अरुलाई जागिर खुवाउने बन्नु छ ।
७-दिमाग जहिलेपनि कुनैपनि चुनौतीको सामना गर्नाले धेरै बुद्दिमानी हुन्छ ।
८-मेरो दिलमा कतिमाया थियो उनले उन्ले जानेको भए के हुने थियो र, मैले मागेको थिए भगवान संग, उनले पनि माग्देको भए के हुनेथियोर ?
९-मान्छे त त्यो हो जसले अरुको दुखलाई पनि महशुस गर्ने गर्छ किनकि आफ्नो दुख मात्र त जनावरले पनि महशुस गर्छ ।
१०-आशा गरिएका सबैकुरा त कहिले पुग्दैन तर आशा गर्न पनि छोडनु पनि त हुदैन आशा नै जिन्दगीको अर्को नाम हो ।
११-असंभव भन्ने शब्द मेरो शब्दकोशमा छैन ।
१२-एउटा मान्छेले जिन्दगीलाई सोधेछ कि किन सबैलाई खुसी दिदैनस ? तब जिन्दगीले भनेछ, म सबैलाई खुशी नै दिने गर्छु तर मान्छेको स्वभाव नै यस्तो छ कि एउटाको खुशी अर्कोको लागि दुख भईदिन्छ ।
१३-बुझ्न नसकिने मान्छेको मन अनि स्वाभाव ।
१४-कुरा नबुझेर नबोल , बोलाइ अनि बुझाइ फरक भयो भने बोल्नुको कुनै अर्थ रहदैन ।
१५-जीवनमा दुई प्रकारका मान्छेहरु असफल हुन्छन्, एउटा जो सोच्छन् तर गर्दैनन् र अर्को जो गर्नु भन्दा पहिले सोच्दैनन् ।
मनछुने भनाइबाट थप
बाह्र यथार्थ तथा प्रेरक लाइनहरु
जिन्दगी आफैमा निकै प्यारो छ, यसको ख्याल गर्नु
मान्छे राम्रो भएर हुँदैन मन पनि रामो हुनुपर्छ
त्यहीँ ब्याक्ती धार्मिक हो, जसले अर्काको निम्ति त्याग गर्नु सक्छ